အမှတ်တရလေးများ: နှစ်သက်မိသော မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၏ ကဗျာများ
ကျွန်မနှစ်သက်မိသော မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၏ ကဗျာလေးများကို ရွေးချယ်ကာ ပြန်လည်စုစည်းတင်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဝေး လွမ်းမျက်ရည်ဝေဒနာပေးချင်လို့ပန်းသက်သေခြေရာကလေးတွေနဲ့သွေခွာပြေးပုန်းသူခင်။ အတိမ်းခက်ပေမယ့် စိမ်းရက်တယ်ငြင်ငြိုမလား ရင်ကိုခွဲကာ သခင်ကြည့်လျှင်ဖြင့် မြင်မိမယ်ထင်။ သမုဒယဆိုတဲ့ ချစ်ကြိုးတစ်မျှင် ရစ်တိုးငင်လို့ အဝိဇ္ဖာလွှမ်း ပူပူသရွေ့ကိုတော့ သူသူတွေ့ကာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ရင်ထဲမှာကျွမ်းမြေ့ဆွေး ဝေးဝေးကလွမ်း။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)သောကခြေရာ (၅) တွယ်တာလှပေမယ့် ကွယ်ရာကပဲ ချစ်တော့မယ်။ အဆင်ခက်လေတော့ မကြင်ရက်တယ် သခင်ဆိုမလား ငြင်ငြိုရင် ကိုယ့်အပြစ်ပါပဲ စိတ်ညစ်တယ်ကွယ်။ သံယောဇဉ် ခွေကာရစ်ပေမယ့် ပြန်ပြောရင် ဝေဒနာဖြစ်ရုံမို. ချစ်တတ်သူ အမူလုပ်ပါလို. မပူရုပ်လို ဟန်ဆောင်တင်းပေမယ့် ရင်တွင်းမှာ မကြည်မွေ.လေတော့ သည်နေ.လဲ စိတ်ညစ်တယ် သိပ်ချစ်တယ်လို. မဆိုသာတော့။ ပါးစပ်ကပြောမှလား နှုတ်ဖျားမှာ မေတ္တာမရှိပါဘူး အကြည့်ဆုံ ဝေဒနာနွေးတွေက အကြင်နာခြေရာလေးတွေပဲ အတွေးမှာ ရစ်တ၀ဲနဲ. ချစ်သည်းရယ် ဘာသာဖြေလို. မာယာတွေ ဟန်ဆောင်ထိန်းကာ တစိမ်းတွေပေါ့။ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) [သောကခြေရာ ရတနာကဗျာများ ] ညို ဟိုး...တောင်ထိပ်မှာ မိုးရိပ်ညိုညို့ မှိုင်းရီဆို့လျှင် ပိုလို့တမ်းတ သတိရလျက် ဖြေပြေခက်လို့... မျက်ဝန်းထဲမှာ မိုးရွာပြီညို...။ ဒါပါပဲကွယ်... ပုံပြင်ရယ်ထား အိပ်မက်များလို မေ့သွားနိုင်ရိုး အဖြစ်မျိုးလား မြတ်နိုးနှောင်ရစ် သောကမြစ်လျှံ ချစ်ခြင်းဆင်းရဲ မိုးသားမည်းညို ပြိုမည်အုံးအုံး မိုးထစ်ခြုံးပြီ... နှလုံးသားတောင်ထိပ်က အလွမ်းမိုးရိပ်တွေပါ ညို ။ ။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)လွမ်းရဲတယ်သူမေ့ပြီလား---လူတွေ့ရန်မဆိုထားနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားရုံ ဖုန်းဆက်တဲ့ဓလေ့တောင်မှ............သြော်----------မုန်းရက်ပြီလို့ထင်။ကြားယောင်ကာ နားထောင်ရတော့မလားရယ်နဲ့ သူ့စကား မုသားတောင်ယုံချင်တတ်သူမို့(သူပြောလျှင်) ........ပုံပြင်ပင် တကယ်မှတ်ပြန်တော့ မလည်ပတ်သူလို သူငြိုငြင်။မလွမ်းတတ်လို့လား လွမ်းတတ်သူ မပူရှိနိုင်ပါ့သူသိအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုမောကာ ဘယ်လောက်ရင်ဆို့ပေမယ့်ခင်မို့လို့ သူစိမ်းပြင်ပြင်စိမ်းချင်ချင်နဲ့ စိမ်းနိုင်ရက် ခင်ခင်စိမ်းပေမယ့် ရင်ငြိမ်းအောင် အပူမသတ်နိုင်လို့ အပူဇာတ်ကို အခန်းဆက်နေတဲ့ပန်းသက်သေ ဝေဒနာပွင့်တွေကလွမ်းရက်ရှည်ကြွေကာ မရင့်ပြန်တော့ ခင်ခင့်လို ဘယ်သူခွဲနိုင်မလဲပူရဲတယ် သည်ရင်ကျွမ်းအောင် လွမ်းတော့ဆယ်သက်..မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) တိတ်တခိုးပန်းပွင့်တယ်ဆိုတာ သဘာဝပါခင်။အလှကြည့်ခံချင်လို့ ပန်ဆင်ပါစေရည်စူးပြီးဆူးပွင့်မဆင်။ခင်ကြိုက်ရင် အညှာကိုချိုးမြတ်နိုးတော့ ပန်ချင်ပန်မပန်ချင် ခင်မကြိုက်တော့လည်းပစ်လိုက်ပေါ့နော်..ခင်ဆင်ချင်မှဆင်ပါတော့။မခင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မဆင်လို့ပဲပစ်ပစ်ခင်သွားရင် ရနံ့ပေးခင်မွှေးရင်ပျော်ရွှင်လို့ခင်မမြင် ခင်မကြည့်ပေမယ့််ခင်သိရင် တို့ကျေနပ်ပါရဲ့ရွက်ချပ်စို ကြိုအကြားမှာပဲပွင့်သွားတာပေါ့။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ချစ်သူမျက်စိမှိတ်ထားပါလျက်ကောင်းကင်ကို သတိရသည့်အခါတိမ်များကို မြင်နေရပါသည်။အလွန်ဝေးကွာသည့် အရပ်သို့ ရောက်နေပါလျက်ပင်လယ်ပြာကို စဉ်းစားမိသည့်အခါ လှိုင်းပုတ်သံကို ကြားယောင်နေတတ်ပါသည်။အခန်းကျဉ်းထဲမှာ အိပ်နေပါလျက်ဥယျာဉ်ထဲသို့စိတ်ရောက်သွားသည့်အခါနှင်းဆီရနံ့ ကို ခံစားရရှိနေတတ်ပြန်သည်။သေဆုံးသည်အထိမှတ်မိကျွမ်းဝင်သွားစေမည့်အရာမှာ(ငါ့)ချစ်သူသာဖြစ်ပါ၏။ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) အချစ်ဦးတစ်သက်တစ်ခါ တစ်လွှာတစ်ရွက်တစ်ခက်တစ်ပွင့် ငုံအဆင့်မို့ရင့်လို့ပဲဝါ၀ါ ညှာတံပဲပြုတ်ပြုတ်ဖြုတ်ခနဲပဲကြွေကြွေ မြေမှာပဲရောက်ရောက်ဖွဖွကလေးကောက်လို့ ပန်းခြောက်လေးပဲမြတ်နိုးမယ်။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) ---------------- မာနမဲ့စွာပြက်ရယ်မှုကိုခံရသည့်အခါအားငယ်သွားတတ်သော်လည်းမည်သည့်အခါမှ စိတ်မဆိုးရက်ပါလေ။အနိုင်ကျင့်မှုကိုခံရသည့်အခါဝမ်းနည်းသွားတတ်သော်လည်းမည်သည့်အခါမှ မနာကြဉ်းရက်ပါလေ။တန်ဖိုးမထားမှုကိုခံရသည့်အခါမကျေနပ်မှုကို ခံစားရတတ်သော်လည်းမည်သည့်အခါမှမငြိုငြင်ရက်ပါလေ။စွန့်ပစ်သွားခြင်းကိုခံရသည့်အခါကျွမ်းမြေ့လောင်မြိုက်စွာပူပန်ရသော်လည်းမည်သည့်အခါမှမေ့လျော့၍မရနိုင်လေ။စတွေ့သည်မှငါသည်သင့်အားမာနတရားကို ပေးအပ်ထားခဲ့သောကြောင့်တည်း။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) --------------------- မာယာမိုး ပြိုမယောင် ဟိုိတောင်က မိုး….. ။ လေအဝှေ့မှာတော့ ရေငွေ့တွေဘယ်ဆီတိမ်းပါလို့ ဘယ်ယိမ်းကာ ဘယ်ကိုပါသလဲ ဝေဒနာပူပူသရွေ့ကို ကွယ်…. သူမေ့မှာစိုး ………။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)--------------------- ချစ်သူသစ်ပင် လွင့်ကြွေကျဖို့တော့ ပွင့်မနေပါရစေနဲ့ဘုရား။ သူချိုးနိုင်ဖို့ အခက်ဝေ သူနေခိုဖို့ အရိပ်ပေး သူ့ဘ၀မှာ အပူတွေဝေးစေဖို့ အစတေးခံနေ...နေလိုရဲ့ သပြေပင်အိုဘ၀နဲ့ (တပည့်တော်)ရှင်ရပါစေသား။ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)---------------------အချစ်ပြက္ခဒိန်မရှိ၊ ရက်အချိန်မသိ။ နာရီမရှိ၊ရာသီမညှိ။ မအိုသည့်အရာ၊ထာဝရအလင်းတန်း၊ဘဝရဲ့စမ်းရေအိုင်လေးတစ်ခု။ ။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)--------------နွယ်တစ်ပင်ထဲ (တည်း)၊ရင်ထဲကနွယ်။ ခက်ညွန့်သန် နုသစ်လို့၊ရစ်ပတ်နှောင်တွယ်။ သံယောဇဉ်ဆိုတာရယ်၊နွယ်ကလေးတစ်ပင်ပေါ့။ ရာသီတွေ ဘယ်လိုပြောင်းပေမယ့်၊ခေါင်းထောင်လို့ကြော့။ ။ မောင်စိန်ဝင်း ( ပုတီးကုန်း )---------------လွမ်းစံပယ်တကယ်မဝေးပေမယ့်၊စံပယ်လေးတွေ ခြောက်ပြီလေ …. ။ မခေါ်သာအတွေ့ခက်၊နေ့ရက်တာရှည် … ။ ပွင့်သစ်တို့ တဝေဝေ၊ပွင့်ကြွေတို့ တဖွေးဖွေး … ။ အသက်တမျှချစ်ပါရဲ့၊လက္ခဏအဖြစ်လို ပွဲဝင်မထိုက်သူမို့၊ကျွမ်းမြိုက်ဆူ အခန်းရှည်ဇာတ်မှာလည်း၊ပန်းကြိုက်သူ လွမ်းနေတတ်အောင်လို့၊အမှတ်တရကွယ် ခြေရာချန်သလား၊ဝေဒနာကျန် တမြည့်မြည့်အဆွေးတွေနဲ့၊မရေရာပြန် တစေ့စေ့တွေးတော့မှ၊(အချစ်ရယ် … ) တနေ့ထက်တနေ့ ဝေး … ။ ။ မောင်စိန်ဝင်း (ပုတီးကုန်း)--------------------ထွက်ဆိုပါသည်…. -သံယောဇဉ်ဖြင့်… နှောင်ငင်တွယ်ရစ်၊ ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိသည်…. -တွယ်ငြိခြင်းဖြင့် ရင်တွင်းဆူုးနစ်၊ ကျွန်မချစ်မိ အပြစ်ရှိသည်…. -အတွယ်အတာ ဘယ်အရာဖြစ် ဖယ်ခွာလို့ရ ၊ကျွန်မမသိ ၀ဋ်ရှိလေသမျှချစ်မိနေရပါသလား…. -နှလုံးသားမှာ၊ အနာတရ ထာဝရဖြစ်တည်… (အခုတော့ ………….) ကျွန်မချစ်မိအပြစ်ရှိသည်….မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)---------------------------------ဆွေး သံယောဇဉ် အမျှင်တန်းကိုရှင်ခန်းဘယ်သူဖြတ်နိုင်ပါ့ပူတတ်သူ တစ်သက်လွမ်းေ၇ာ့ လို့ လက်ကမ်းက ဝေဒနာမျှချင်လည်းဘ၀နွေ အနုသယတောမှာသမုဒ်ဒယအမော တစ်ဇာတ်သိမ်းအောင်(အခုတော့ …)ခပ်စိမ်းစိမ်းနေပါ့မယ်.မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)------------------အချစ်ကဗျာတစ်ပုဒ်တွယ်တာလှပေမဲ့ကွယ်ရာကဘဲချစ်တော့မယ်အဆင်ခက်လေတော့မကြင်ရက်တယ်သခင်ဆိုမလားနေညိုရင်ကိုယ့်အပြစ်ပါဘဲစိတ်ညစ်တယ်ကွယ်။ ။သံယောဇဉ်ခွေကာရစ်ပေမဲ့ပြန်ပြောရင်ဝေဒနာဖြစ်ရုံမို့ချစ်တတ်သူအမူလုပ်ပါလို့ရင်တွင်းမှာမကြည်မွေ့လေတော့ဒီနေ့လဲစိတ်ညစ်တယ်။ ။သိပ်ချစ်တယ်လို့မဆိုသာတော့ပါးစပ်ကပြောမှာလားနှုတ်ဖျားမှာမေတ္တာမရှိပါဘူးအကြည့်ဆုံဝေဒနာနွေးတွေကအကြင်နာခြေရာလေးတွေဘဲချစ်သည်းရယ်ဖာသာဖြေလို့မာယာတွေဟန်ဆောင်ထိန်းကာတစိမ်းတွေပေါ့။ မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)----------------------------ကျွန်တော့်မြေမှာ ပန်းပွင့်ကို ကျွန်တော်မင်၊ပန်းပင်ကို ကျွန်တော်ပျိုး။ထုံနံ့သာ ငုံကာဖူးခါမှ၊လက်ဦးသူ .. ချိုး။ အသီးကို ကျွန်တော်မင်၊အပင်ကို ကျွန်တော်ပျိုး။သီးကင်းငုံ ပေါ်ကာထွက်ခါမှ၊လက်ဦးသူ .. ခိုး။ ပန်းအလှ ကျွန်တော်မင်၊ပန်းပင်ကို ကျွန်တော်ပျိုး။ပွင့်ချိန်တန် ရနံ့ရိုင်းနဲ့၊ပဒိုင်းပင်မျိုး။ အချိုသီး ကျွန်တော်မင်၊အချိုပင် ကျွန်တော်ပျိုး။သီးချိန်တန် တမာပျားလို၊ခါးသည့်အမျိုး။ ရေမလောင်း ပေါင်းမသင်၊ပန်းတစ်ပင်ပါလား။ မမျှော်ရဲပြီဘု၊ကံနည်းသူ ကျွန်တော်မို့၊တော်သလိုပွင့်၊သင့်သလိုဖူး၊လက်ဦးသူ ချိုးချိုး၊မြတ်နိုးသူ ပန်ပန်၊ကိုယ့်ထိုက်နဲ့ ကိုယ့်ကံပေါ့၊ကိုယ်တန်လျှင် ကိုယ်ပန်ရချည်လိမ့်လို့၊ဖြေသိမ့်ကာ စိုးရိမ်စိတ်နှင့်၊ရင်ထိတ်တကား။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)------------------မာန် အရွက်အတံ၊အနှံအသီး၊ဖျက်ဆီးရုံမျှ၊အားမရသေး၊ပင်မကိုဖြတ်၊အသေသတ်လည်း၊မားမတ်ညွန့်ဝေ၊ခေါင်းထောင်နေအံ့၊ရေသောက်မြစ်မှ၊လူးလွန့်ထကာ၊ခက်မရှင်သန်နေအုံးမည်။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)ကဗျာပုံလေးတွေကို Share ခွင့်ပြုသော Wunna Than Htun ကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ပုံတချို့ကို Google မှ ရှာထားပါသည်။မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း)၏ ကဗျာများ'
မ၀ါရေကဗျာနဲ့ ပုံလေးတွေကြိုက်လို့ copy ကူးပြီး face book မှာ ရှဲ လိုက်တယ်။ ခွင့် ပြုပါနော်။ မ၀ါရဲ့ Blog name ကို reference ထည့် ထားတယ်။ ကျေးဇူးပါနော်။ မ၀ါ ခွင့် မပြုဘူးဆိုရင် ကျွန်မ ပြန်ဖျက်လိုက်မယ်။
မမဝါ...နောက်ရက်အနည်းငယ်ဆို ဘဝစပြီမို့ ဘဝအစမှာ မောင်စိန်ဝင်းနဲ့ ( ပုတီးကုန်း) နဲ့ ရင်ဖွင့်လိုက်တာလား။ အင်းလေ။။ ပန်းရောင်ဝတ်စုံကို လှမ်းမြင်နေမှတော့ ပုတီးကုန်းကိုလည်း လှမ်းမြင်သင့်ပြီပေါ့နော်.အဟီး....ချစ်တဲ့ညီမအလွမ်းမြို့
အလွမ်းမြို့လေ-အွန်လိုင်းမှာ မစရလို့ ဘလော့ဂ်ဝင်ပြီး ကွန်မန့်ရေး စ တာပေါ့လေ ဟုတ်လား ချစ်ညီမ။ :) မမက အွန်လိုင်းတက်တော့ဘူး။မွေးနေ့မှာ မွေးနေ့လက်ဆောင် သီလရှင်ဝတ်စုံပေးပြီး သီလရှင်ဝတ်ခိုင်းမှာကြောက်လို့.. :)တချို့ညီမလေးတွေကလည်း မမ၀ါဘာအရောင်ကြိုက်လဲ ၊ဘာလက်ဆောင်ဝယ်ပေးရမလဲ စုံနေတာပဲ မေးကြလို့ ပုန်းနေလိုက်တာ... ဟိဟိအောက်တိုဘာ ကျော်မှပဲ အွန်လိုင်တက်တော့မယ်ကွယ်. :Pချစ်တဲ့မမ
မမ ရေ ကျွန်တော် အခုလို ဖတ်ခွင့်ရတဲ့ အတွက် မမကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်း မမတင်ထားတဲ့ကဗျာတွေ အများကြီးဖတ်ခွင့် ရတဲ့ အတွက် ဗဟုသုတ အပြည့်ရပါတယ် ခင်ဗျာ...............
မဝါရေ ဆရာရဲ့ကဗျာတပုဒ်ဖြစ်တဲ့ ဝေးဝေးကသာလွမ်းပါမည် ကိုလဲတင်ပေးပါနော်......အရမ်းနှစ်သက်မိတဲ့ကဗျာလေးမို့ပါ.....ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်......
အမရေ FB မှာရှယ်လိုက်ကြောင်းခွင့်တောင်းပါတယ်
သောကခြေရာ (၅)တွယ်တာလှပေမယ့်ကွယ်ရာကပဲ ချစ်တော့မယ်။အဆင်ခက်လေတော့မကြင်ရက်တယ် သခင်ဆိုမလားငြင်ငြိုရင် ကိုယ့်အပြစ်ပါပဲစိတ်ညစ်တယ်ကွယ်။သံယောဇဉ် ခွေကာရစ်ပေမယ့်ပြန်ပြောရင် ဝေဒနာဖြစ်ရုံမို.ချစ်တတ်သူ အမူလုပ်ပါလို.မပူရုပ်လို ဟန်ဆောင်တင်းပေမယ့်ရင်တွင်းမှာ မကြည်မွေ.လေတော့သည်နေ.လဲ စိတ်ညစ်တယ်သိပ်ချစ်တယ်လို. မဆိုသာတော့။ပါးစပ်ကပြောမှလားနှုတ်ဖျားမှာ မေတ္တာမရှိပါဘူးအကြည့်ဆုံ ဝေဒနာနွေးတွေကအကြင်နာခြေရာလေးတွေပဲအတွေးမှာ ရစ်တ၀ဲနဲ.ချစ်သည်းရယ် ဘာသာဖြေလို.မာယာတွေ ဟန်ဆောင်ထိန်းကာတစိမ်းတွေပေါ့။ စပြီး သိခဲ့ရတဲ့ကဗျာ​လေး​ပေါ့
ကဗျာမမှီ စာမပီပဲခက်ခက်ဝေးဝေးကနေမတောက်တခေါက်ကဗျာလေးတွေရေးတတ်တဲ့ကျတော် tzo အတွက်ဆရာဦးစိန်ဝင်းကဗျာတွေကရှေ့သိုလှမ်းချီဖို့တွန်းအားပေးနေသလိုပဲ thanksပါမဝါ
Number of View: 680Mom & Baby Magazine, အတွဲ (၁)၊ အမှတ် (၁) ကစ်တုန်က ငါးတန်းတက်နေတဲ့ ကျောင်းသားလေးတစ်ယောက်ပါ။ ကစ်တုန်ရဲ့ ကျောင်းနာမည် က ဝေဟင်ထွဋ်ခေါင် ဖြစ်...
ကိုခင်မောင်ကျော်+Dr.နေကြည်မြင့် (စင်္ကာပူ)၏ မင်္ဂလာနှစ...
မွေးနေ့ အလှူမှတ်တမ်း (၂၇.၁၀.၂၀၁၁)
မွေးနေ့ အမှတ်တရ (၂၇.၁၀.၂၀၁၁)
မွေးနေ့ အမှတ်တရ လက်ဆောင် (၂၇.၁၀.၂၀၁၁)
မေတ္တာရှင်ဆရာတော် အရှင်ဇ၀န(ရွှေပြည်သာ)၏ ၀ိပဿနာအလုပ်ေ...
၂၉.၁၀.၂၀၁၁(စနေနေ့) ကထိန်အလှူပွဲအတွက် အလှူရှင်များ ...
ပါချုပ် ဆရာတော် ကြီး ဒေါက်တာနန္ဒမာလ ဘိဝံသ တရားပွဲ ဖ...
Birthday Donation ( Both Breakfast and Lunch)18/10...
အဖြစ်က ဒီလို :(
ဗုဒ္ဓဂယာ ဥရုဝေလတရားစခန်း ကျောင်းအလှူရှင်များ ဖြစ်နိ...
မခိုင်ဇင်အေး(စင်္ကာပူ)၏ မိဘများဖြစ်သော ဦးမောင်း(ခ)...
သီတင်းကျွတ်လပြည့်နေ့ (အဘိဓမ္မာ အခါတော်နေ့)
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ (၁၂.၁၀.၂၀၁၁)
သံဃာတော်များအတွက် သပိတ်စင် အလှူ
၂၀၁၁ ဘုံဆွမ်းအလှူရှင်များ၏ နောက်ဆုံးအကြိမ် လှူဒါန်...
ဒေါ်ခင်သန်းဝင်း (ရွှေပြည်သာ) မွေးနေ့အလှူပွဲ(၉.၁၀.၂၀၁...
မိခင်ဒေါ်တင်တင်လှိုင်အား အမှုးထား၍ သားမောင်ထွန်းထွန်...
အောက်တိုဘာလ ဆွမ်းအလှူရှင်များစာရင်း (စစ်ကိုင်းတောင...
စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းလောင်းအသင်း ၂၀၁၁ ဘုံဆွမ်းအလ...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မစ္စ ရင်လပ်ရှင်နာဝပ် ၏ ကိုယ်ရေးအ...
iPhone iPad iPod iPaid :)
ထက်ထက်နဲ့ သူမကို ချစ်သောသူများ-
ဦးဇော်မိုးဆန်း + ဒေါ်နော်နော်ရည်မွန် တို့၏သမီးငယ်ေ...
မေတ္တာရှင် ဖောင်ဒေးရှင်း ၊ စစ်ကိုင်းတောင်ရိုးဆွမ်းေ...
Myanmar Fashion Show at MCC . (1.10.2011)
အလွမ်းမြို့လေး(ဒိန်းမတ်)၏ မွေးနေ့အလှူ။( ၁.၁၀.၂၀၁၁)...